Ku kaydi $ 1000 oo ku socda cirifka 5.65 Smooth Xill oo kaliya $ 999
Home » Treadmills » Smooth » Ku kaydi $ 1000 oo ku socda qadada 5.65 Smooth Xill oo kaliya $ 999
Ku kaydi $ 1000 oo ku socda qadada 5.65 Smooth Xill oo kaliya $ 999
Dib-u-bixinnada fayodhowrka waxay kuu keeneysaa iibka treadmill 2013 ee Smooth Fitness
Ku kaydi $ 1000 on Treadmill Smooth 5.65
Qiimaha tafaariiqeed ee caadiga ah waa $ 1999 ... iyadoo iibsigan aad bixinayso $ 999 !!!
Haddii lacagku hooseeyo, waxaa jira ikhtiyaarka lacag bixinta bil kasta ee $ 39 / bishii
Ku saabsan khadadka 5.65 Smooth Xilliga:
Qalabka 5.65 waa qalab tayo sare leh, qalab tactooli ah oo leh habka xNUMX marxaladda jilicsan ee jilicsan si uu kaaga caawiyo inaad meel bannaanaato oo aad si sahlan u keydiso. Iyada oo dusha sare loo yaqaan "Smooth 2 treadmill gas lift-help lift" waxaad si tartiib ah u jeexi kartaa gogolka treadmill ee booska oo gadaal u dhigo kaydinta.
Smooth 5.65 wuxuu leeyahay nidaam maqal ah oo SmoothSound ™ ah. Waxaad ku dari kartaa iPod / MP3-gaaga qalabka wax lagu dhigo ee maqalka iyo dhageysiga muusikada aad jeceshahay iyada oo loo marayo sheekooyinka treadmill
Waxaa jira shaashadda LED-ka ee 3 oo leh LCD Dot Matrix. Sawirkaan wuxuu muujinayaa waqtiga, masaafada, xawaaraha, qulqulka, heerka wadnaha, iyo kalooriyooyinka
Qalabka 5.65 wuxuu leeyahay 2.75 mashiinka tamarta farsamooyinka oo soconaya muddo dheer. Waxay leedahay guddi xeeladaysan oo loo yaqaan 'PWM Width Modulation Modulation (PWM)' kaas oo sida caadiga ah laga helo treadmills ganacsiga. Qalabka 5.65 wuxuu ku shaqeeyaa dhawaaq la'aan
Treadmill Tani waxay leedahay 14 barnaamijyada tababarka kala duwan:
- Barnaamijka manhajka 1
- 12 xawaaraha / barnaamijyada qalabka
- 1 barnaamijka dufanka jirka.
Treadmill sifiican ayaa leh qaboojiyaha biyaha 2 iyo raaxada akhriska ee isku dhafan kaas oo aad u weyn buugga ama xitaa iPad ama qalabka iPad. Waxaa jira dhisme farsamo oo sidoo kale kaa caawin doona inaad ku qaboojiso inta lagu jiro xilligaaga shaqada.
Smooth 5.65 waxay leedahay damaanad treadmill oo aad u fiican - Waxaad heysataa damaanad nololeed oo ku saabsan qaabka, 5 sano ee qaybaha, iyo sanadaha 2 ee shaqada.
Iibso Qalabka 5.65 Treadmill Maanta laga bilaabo Smooth Fitness !!
Treadmills dheeraad ah oo jimicsiga Treadmills Waxaa sidoo kale loo heli karaa in la soo iibsado on Amazon leh Shipping Dusha bilaash ah:
* Qiimaha $ 999 ee 5.65 Treadmill waa mid sharci ah oo ka mid ah 10 / 17 / 13 1: 15 AM Qiimaha waa sax sida waqtiga / taariikhda la tilmaamay iyo waa isbedel
October 17, 2013 Jimicsiga Smooth, Dhaqdhaqaaqa fudud, Treadmills No Comment	565, dhar xannibaad 5.65 ah, 565 jirdhis dheeri ah, dhar xannibaad 565 ah, habdhaqan fiican 5.65 treadmill
Soo iibso 1 6lb Celltech & Ku hesho 45ct Neurocore BILAASH AH OO AAD XAQ U LAHAYN 10 / 31 / 13
24 Saacadda Fudud $ $ 9.99 Khidmadda Bilowga Isbedelka Lacageed ee Lacagta Xubinta 9 / 30 / 14